I have been broken. I have known hardship and I have lost myself. But here I stand, still moving forward and growing stronger each day. I will never forget the harsh lessons in my life. They made me stronger.
ကျွန်တော်တို့သက်ရှိလူသားတိုင်းမှာ အိပ်မက်တွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အဲဒီအိပ်မက်ကို မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်ရာထဲမှာပဲထားခဲ့ပြီး တစ်ချို့တွေကတော့ အဲဒီအိပ်မက်ရဲ့နောက်ကို မရမကလိုက်တတ်ကြပါ တယ်။ အိပ်မက်ကို အပြင်မှာ တကယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ လူတော်နဲ့ လူညံ့ဆိုပြီး လူအမျိုးအစား ရလာဒ်၂ခုဖြစ်သွားပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်းအိပ်မက်မက်တာချင်း အတူတူမှာ ဘာလို့ရလာဒ်တွေမတူတာလဲဆိုရင်တော့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချင်စိတ်တွေမတူလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကအောင်မြင်တဲ့သူ သူများထက် ထူးချွန်ကျော်ကြားတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ရင်တော့ အိပ်မက်ကို အိပ်မက်အတိုင်း ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ အိပ်မက်ကနေ လက်တွေ့ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာပါ။
ကြိုးစား ချင်စိတ်ကြောင့် ကြိုးစားနေရင်းကလည်း လူတန်းစား နှစ်မျိုးထပ်လို့ကွဲပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရှုံးနိမ့်မှု လဲပြိုကျမှု တွေရဲ့ ဒဏ် ကို ခံနိုင်ရည်ပေါ်မူတည်သွားတာပါ။ တစ်ချို့ကတစ်ခါ ကြိုးစားပြီး အနည်းငယ် မှားယွင်းမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးသွား ရတဲ့အခါ လွယ် လွယ်လေးနဲ့ပဲ လက်လျော့တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ကတော့ ကျားကုတ်ကျားခဲ မရရအောင် လဲရင်ပြန်ထ မှားရင်ပြန်ပြင်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှု ကို ရရှိကြ ပါတယ်။